ဖတ်လို ခရိုအေးရှား ဂျာမန် စပိန် စီဘွာနို ဒတ်ချ် နော်ဝေ ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် မြန်မာ ရိုမေးနီးယား လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား ဟီလီဂေနွန် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ်
ဂျူးတို့၏ ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ညဦးတွင် စတင်သနည်း။
ယေဟောဝါသည် မိမိလူမျိုးအား အပြစ်ဖြေရာနေ့နှင့်ပတ်သက်၍ ပညတ်ပေးရာတွင် “ထိုနေ့၌ အဘယ်အလုပ်ကိုမျှ မလုပ်ရ။ . . . ထိုနေ့သည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောနေ့ . . . ဖြစ်၏။ . . . ညဦးမှစ၍ နက်ဖြန်ညဦးတိုင်အောင် ဥပုသ်စောင့်ရမည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (ဝတ်ပြုရာ ၂၃:၂၈၊ ၃၂) ထိုပညတ်က တစ်နေ့တာသည် နေဝင်ပြီးနောက် ညဦးချိန်မှစတင်၍ နောက်နေ့နေဝင်ချိန်တွင် ကုန်ဆုံးသည်ဟူသောအချက်ကို ဖော်ပြနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျူးတို့အတွက် တစ်နေ့တာသည် ညဦးချိန်မှ နောက်နေ့ညဦးအချိန်အထိ ကြာညောင်းသည်။
ထိုနေ့ရက် တွက်ချက်နည်းသည် ဘုရားသခင်ချမှတ်သောပုံစံကို အခြေပြုသည်။ ဖန်ဆင်းရာ ပထမနေ့နှင့်ပတ်သက်သော မှတ်တမ်းတွင် “ညဦးနှင့်နံနက်သည် ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏” ဟုဖော်ပြသည်။ နောက်ပိုင်း “နေ့ရက်များ” ကိုလည်း ထိုအတိုင်းပင်ရေတွက်သောကြောင့် “ညဦး” ချိန်သည် တစ်နေ့တာ၏အစဖြစ်သည်။—ကမ္ဘာဦး ၁:၅၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၃၁။
ဂျူးများသာ နေ့ရက်များကို ထိုသို့တွက်ချက်သည်မဟုတ်ပါ။ အေသင်မြို့သားများ၊ နမီးဒီးယန်းလူမျိုးများနှင့် ဖိုနီးရှားလူမျိုးများလည်း အလားတူတွက်ချက်ကြသည်။ သို့သော် ဗာဗုလုန်လူမျိုးသည် နေထွက်ချိန်ကို တစ်နေ့တာ၏အစအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အီဂျစ်နှင့်ရောမလူမျိုးတို့မူ ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ပင် ညသန်းခေါင်အချိန်မှ နောက်နေ့ညသန်းခေါင်အထိကို တစ်ရက်ဟု သတ်မှတ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ် ဂျူးများသည် ယနေ့တိုင် နေဝင်ချိန်မှ နောက်နေ့နေဝင်ချိန်အထိ ဥပုသ်စောင့်သော ဓလေ့ရှိသည်။
“ဥပုသ်နေ့တစ်နေ့ခရီး” ဟူသည် အဘယ်နည်း။
တပည့်များသည် ယေရှု ကောင်းကင်သို့တက်သွားသည်ကို မြင်တွေ့ရပြီးနောက် သံလွင်တောင်မှ “ဥပုသ်နေ့တစ်နေ့ခရီး” ကွာဝေးသော ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်ခဲ့ကြ၏။ (တမန်တော် ၁:၁၂) ခရီးသွားတစ်ဦးသည် တစ်နေ့လျှင် မိုင် ၂၀ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လျှောက်နိုင်ပေမည်။ သို့သော် သံလွင်တောင်သည် ယေရုရှလင်မြို့နှင့် သိပ်မဝေးပေ။ သို့ဆိုလျှင် “ဥပုသ်နေ့ တစ်နေ့ ခရီး” ဟူသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
ဥပုသ်နေ့တွင် ဣသရေလလူမျိုးသည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မလုပ်ဘဲ အနားယူကြ၏။ ထိုနေ့၌ အိမ်တွင် မီးပင် မမွှေးကြပါ။ (ထွက်မြောက်ရာ ၂၀:၁၀; ၃၅:၂၊ ၃) “လူတိုင်း မိမိနေရာ၌နေစေ၊ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ မိမိနေရာမှ အဘယ်သူမျှမသွားစေနှင့်” ဟုယေဟောဝါမိန့်မှာသည်။ (ထွက်မြောက်ရာ ၁၆:၂၉) ထိုပညတ်သည် ဣသရေလလူတို့အား ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှ အနားရစေပြီး ဘဝတွင် ဝတ်ပြုရေးနှင့် ဆိုင်သောအရာများကို ပို၍အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အရေးရစေပေမည်။
ယေဟောဝါ၏ ပညတ်များတွင်ပါသော မူများဖြင့် မကျေနပ်နိုင်သော ရဗ္ဗိများသည် ဥပုသ်နေ့တွင် လူတစ်ဦး မည်မျှအကွာအဝေးအထိ လျှောက်နိုင်သည်ကို မိမိတို့၏စိတ်အထင်ဖြင့် တိတိကျကျ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ၊ ဝတ်ပြုရာနေရာသို့သွားခြင်းကဲ့သို့သော ကဏ္ဍများတွင်ဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စွယ်စုံကျမ်းတစ်စောင်က ဤသို့ဆိုသည်– “တင်းကျပ်လွန်းသော ဥပုသ်ပညတ်များကြောင့် . . . ဥပုသ်နေ့တွင် မည်သည့်ဣသရေလလူမျိုးမျှ ဥပုသ်နေ့တစ်နေ့ခရီးဟုခေါ်သည့် အကွာအဝေးထက်ပို၍မသွားရဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။” ထိုအကွာအဝေးမှာ မိုင်ဝက်မှ တစ်မိုင်၏ဆယ်ပုံခုနစ်ပုံကြား အကွာအဝေးတစ်ခုခုနှင့်ညီမျှသော အတောင် ၂,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
[စာမျက်နှာ ၁၁ ပါပုံ]
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင် အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈